Uyingozi Kangakanani Umbhoshongo Wakho WeTech? | Martech Zone
Ungaba namuphi umthelela uma umbhoshongo wakho wezobuchwepheshe uwela phansi? Kungumqondo ongithinte ngeMigqibelo embalwa edlule njengoba izingane zami bezidlala iJenga ngenkathi ngisebenza kwisethulo esisha sokuthi kungani abathengisi kufanele bacabange kabusha izitaki zabo zobuchwepheshe. Kungitholile ukuthi izitaki zobuchwepheshe nemibhoshongo yeJenga empeleni kunokuningi okufana ngakho. UJenga, vele, udlalwa ngokufaka izinqwaba zamapulangwe kuze kufike yonke into eyehlayo. Ngokwengezwa okusha ngakunye, isisekelo siba buthakathaka… futhi ekugcineni umbhoshongo uyehla. Ngeshwa, izitaki zobuchwepheshe zisengozini efanayo. Njengoba kunezelwa izingqimba, umbhoshongo uba buthakathaka futhi wethule ubungozi obuningi.
Kungani ukuthakazelisa nge-tech ethe xaxa?
Yebo, leyo nkulumo engikhulume ngayo ngenhla ebengisebenza kuyo - muva nje ngibe nenjabulo yokuyethula ku- Isitolo.Org inkomfa eLas Vegas. Ibuye yazwelana nababekhona, ngikholelwa, ngoba bekuhluke kakhulu kulokho abanye abathengisi nabathengisi abashumayela ngakho namuhla. Ngemuva kwakho konke, umhlaba wethu ugcwele imiyalezo yokuthi kanjani futhi kungani sidinga ubuchwepheshe BENGEZIWE. Impela hhayi ngaphansi. Futhi indlela ubuchwepheshe, hhayi thina njengabakhangisi abanobuciko namasu, okuyisixazululo sezimfuno ezikhulayo ezivela emabhizinisini ethu nokwandisa okulindelwe kubathengi.
Njengoba sonke siqhutshwa njalo ngobuningi bemiyalezo ememeza kubakhangisi ukukhulisa izitaki zethu zobuchwepheshe, ngiyakucela ukuthi uthathe isikhashana ucabange ngayo futhi uyiphonsele inselelo. Lo mbono wokuthi lapho sengeza ubuchwepheshe obuningi ezitokisini zethu, kuzoba ngcono lapho sikhona, uyiphutha. Eqinisweni, iqiniso empeleni liphambene nalokho. Uma i-hodgepodge yakho yamathuluzi, isoftware, izinhlelo zokusebenza nezinhlelo ezahlukahlukene zihluka kakhulu, ukungasebenzi kahle, izindleko kanye nobungozi obufaka enhlanganweni yakho.
Abanye abathengisi babheka indawo ye-martech futhi bafuna ukusebenzisa amaningi ala mathuluzi ngendlela abacabanga ukuthi bangakwazi noma kufanele ngayo. (Umthombo: IMartech Namuhla)
Ubuwazi ukuthi iningi labakhangisi lisebenzisa ubuchwepheshe obungaphezulu kwesigamu sedazini? Eqinisweni, abaphathi bezentengiso abangama-63% bathi iqembu labo lisebenzisa phakathi kwezingcezu zobuchwepheshe ezahlukahlukene eziphakathi kweziyisithupha kuya kwezingu-20, ngokusho kukaConductor
Source: Abaphathi Bokumaketha Abangama-500 Bembula Isu Labo Lika-2018, Umqhubi
Kukhona ubhadane olwandile lokungena ngokungena njengesifo. I- "Shadow IT" nezingozi zayo ezihambisana nayo azikwazi ukunganakwa.
I-Shadow IT kanye nezingozi ezithweleyo
Izingqinamba ezithile zisondela emathunzini lapho izinhlelo zokusebenza ezintsha noma amadivayisi evela kwingqalasizinda yenkampani ngaphandle kokubandakanyeka nokuholwa yi-IT. Le yi-Shadow IT. Uyalazi igama? Imane ibhekise kubuchwepheshe obungeniswa enhlanganweni ngaphandle kokubandakanyeka kwe-IT.
I-Shadow IT ingaletha ubungozi bezokuphepha kwenhlangano, ukungahambisani kokuhambisana, ukucushwa nokuhlanganiswa kokubi, nokuningi. Futhi, empeleni, noma iyiphi isoftware ingaba yi-Shadow IT… ngisho amathuluzi nezixazululo eziphephe kakhulu, ezibhekwa kakhulu. Ngoba ayikho mayelana ne-tech, uqobo. Kumayelana neqiniso lokuthi i-IT ayazi ukuthi ilethwe enhlanganweni. Futhi-ke, ayikwazi ukusebenza ngendlela esheshayo noma esheshayo ukuphendula lapho leyo teknoloji ibandakanyeka ekwephuleni, ekugengeni, noma kolunye udaba - ngoba nje abazi ukuthi kuphakathi kwezindonga zenkampani. Abakwazi ukuqapha abangazi ukuthi kukhona.
Ezinye zezinhlelo zokusebenza ezivame kakhulu ukufakwa ngaphandle kwemvume ye-IT zifaka phakathi ukukhiqiza okubonakala kungenangozi nezinqubo zokusebenza.
Ithiphu yePro: Lawa akuwona amathuluzi “amabi”. Eqinisweni, zivikelekile futhi zivikelekile. Khumbula ukuthi isoftware nezinkundla ezaziwa kabanzi kungaba yi-Shadow IT. Inkinga ayilele kubuchwepheshe, uqobo lwayo, kepha esikhundleni sokungabandakanyeki kwe-IT. Uma bengazi ukuthi lezi noma enye i-tech ingeniswa enhlanganweni, abakwazi ukuyiphatha noma ukuyibhekisisa ngezingozi ezingaba khona. Noma iyiphi ingxenye entsha yobuchwepheshe, noma incane kangakanani, kufanele ibe kwi-radar ye-IT.
Kepha ake sibheke izizathu ezintathu ezinkulu zokuthi iShadow IT nezitaki ezinkulu zobuchwepheshe zikubeka wena nethimba lakho engcupheni nasebungozini obukhulu.
Ukungasebenzi kahle kanye nokudilizwa - Izingcezu eziningi zobuchwepheshe - ngisho nezinhlelo zokusebenza zokukhiqiza, amasistimu engxoxo yangaphakathi, kanye nezixazululo ze- “point” eyodwa - kusho ukuthi isikhathi esiningi siyadingeka ukuphatha konke. Ubuchwepheshe obuningi namathuluzi enza ukuthi abadayisi basebenze njengabaphathi bokuhlanganiswa kobuchwepheshe, abagqugquzeli bedatha, noma abaphathi befayela le-CSV. Lokhu kususa esikhathini esingasetshenziswa futhi okufanele sisetshenziswe esikhundleni sezinto zokudala, ezinamasu omuntu wokumaketha. Cabanga ngakho… mangaki amapulatifomu owasebenzisayo nsuku zonke ukwenza umsebenzi wakho? Uchitha isikhathi esingakanani usebenza nalawa mathuluzi ngokungafani necebo lokushayela, ukudala okuqukethwe okuphoqayo, noma ukusebenzisana nabantu osebenza nabo? Ama-82% wabasebenzi bokuthengisa nokumaketha balahlekelwa kuze kufike ehoreni ngosuku beshintsha phakathi kwamathuluzi wokumaketha Yisibalo esesabekayo lesi uma ucabanga ukuthi lokhu kulingana namahora ama-5 masonto onke. Amahora angama-20 njalo ngenyanga. Amahora angama-260 njalo ngonyaka. Konke okusetshenziselwe ukuphatha ubuchwepheshe.
Izindleko ezingahlosiwe - Umthengisi ojwayelekile usebenzisa amathuluzi we-tech angaphezu kwayisithupha ukwenza imisebenzi yakhe. Futhi abaphathi babo basebenzisa amanye ama-dashboard amabili kuya kwamahlanu namathuluzi wokubika ukuqonda ukuthi amaqembu abo abika kanjani. Cabanga ukuthi izindleko zalawa mathuluzi zingangeza kanjani (futhi kungaphezu nje kwevolumu enkulu):
komsebenzi: Amathuluzi amaningi awasasebenzi, okusho ukuthi sikhokhela amathuluzi amaningi enza izinto ezifanayo.
Ukukhishwa: Kaningi, siletha ubuchwepheshe ngenhloso ethile futhi, ngokuhamba kwesikhathi, sidlulela kuleso sidingo… kodwa ubuchwepheshe siyabugcina, noma kunjalo, futhi siqhubeke nokuthola izindleko zaso.
Igebe Lokutholwa: Izici ezengeziwe ezinikezwa yipulatifomu noma ucezu lobuchwepheshe, KUNGENZEKA ukuthi kufanele uzisebenzise zonke. Kunezici nemisebenzi eminingi kunethimba elijwayelekile elingafunda, lamukele, futhi lisebenzise ezinhlelweni zalo. Ngakho-ke, ngenkathi sithenga zonke izinsimbi namakhwela, sigcina ngokusebenzisa amaphesenti amancane wezinto eziyisisekelo… kepha sisakhokhela iphakethe lonke.
Ubumfihlo / ukuvikelwa kwedatha nobungozi benhlangano - Ubuchwepheshe obuningi obulethwa enhlanganweni - ikakhulukazi leyo eyi-Shadow IT - ingozi eyengeziwe yethulwa kanye nayo:
Ukuhlaselwa kwe-cyber. Ngokusho kukaGartner, ngo-2020, ingxenye eyodwa kwezintathu ye-cyberattack yokulwa namabhizinisi izotholakala ngokusetshenziswa kwe-Shadow IT.
Ukwephulwa kwedatha. Ukwephulwa kwedatha kubiza ibhizinisi elijwayelekile elizungeze u- $ 3.8 wezigidi.
Ithimba lakho le-IT linezinqubo, amaphrothokholi, amasistimu, nezindlela zokuvikela ezikhona ukunciphisa lezi zingozi. Kepha abakwazi ukusebenza kakhulu noma ukusabela ngokushesha lapho kuvela izingozi ezungeze ubuchwepheshe abangazi ukuthi bukhona ngaphakathi kwenhlangano.
Sidinga i-mindhift ehlangene, eguqula indlela esibheka ngayo ukuqaliswa kobuchwepheshe futhi isuse esimweni sengqondo "sokunweba" siye kwesinye "sokuhlanganiswa." Isikhathi sokubuyela kuzisekelo.
Singasika kanjani, singakuvumelanisa kuphi ukudilizwa, futhi singawaqeda kanjani amathuluzi angadingeki?
Kunezinyathelo ezimbalwa ongazithatha ukuze uqalise.
Qala ngezinhloso zakho - Buyela kuzisekelo Zokumaketha 101. Phusha ubuchwepheshe bakho ohlangothini bese ucabanga kuphela ngalokho iqembu lakho elidinga ukukufeza ukusiza ibhizinisi ukufeza izinhloso zalo. Yini imigomo yakho yokumaketha? Imvamisa, siqala ngobuchwepheshe bese sizibuyisela emuva ukusuka lapho siye kumasu wokumaketha amephu aqonde ngqo kubuchwepheshe bethu. Lokhu kucabanga kubuyela emuva. Cabanga kuqala ngezinhloso zakho. Ubuchwepheshe buzoza kamuva ukuxhasa isu lakho.
Cwaninga isitaki sakho sobuchwepheshe - Zibuze le mibuzo mayelana nesitaki sakho sobuchwepheshe nokuthi iqembu lakho lisebenzisana kanjani nayo:
Ngabe usebenzisa isu le-omnichannel ngempumelelo? Kuthatha amathuluzi amangaki?
Uchitha isikhathi esingakanani ukuphatha ubuchwepheshe bakho?
Uchitha malini kusitaki sakho sonke sezobuchwepheshe?
Ngabe amalungu eqembu lakho asebenzisa isikhathi sabo ukuphatha ubuchwepheshe? Noma ngabe basebenzisa amathuluzi okuba ngamasu amaningi, abathengisi bokudala?
Ingabe ubuchwepheshe bakho busebenzela wena noma ingabe usebenzela ubuchwepheshe bakho?
Funa Itheknoloji Efanele Yecebo Lakho - Uma usuvele uzibekele izinhloso zakho, wahlola isitaki sakho sobuchwepheshe, nokuthi iqembu lakho lisebenzisana kanjani nalo lapho kufanele uqale ukubheka ukuthi yibuphi ubuchwepheshe obudingayo ukuze wenze isu lakho liphile. Khumbula, i-tech yakho kufanele ikhulise imizamo yakho neqembu lakho. Hhayi ngenye indlela ezungeze. Impela, sinezincomo zokuthi ungabukhetha kanjani ubuchwepheshe obukufanele, kepha ngeke ngiguqule le ndatshana ibe yitimu yokuthengisa. Iseluleko esihle kakhulu engizosinikeza yilesi:
Cabanga ukuhlanganisa isitaki sakho sibe yizicucu ezimbalwa ngangokunokwenzeka.
Qonda ukuthi ubuchwepheshe bakho buzokusiza kanjani usebenzise isu le-omnichannel.
Buza ukuthi i-tech yakho izoyihlanganisa kanjani idatha yakho ibe yi-database eyodwa ukuze ukwazi ukuthola umbono ogcwele, ohlangene wekhasimende ngalinye KANYE nokusebenzisa kahle izinto ezinjenge-AI nokufunda komshini.
Uzakwethu we-IT - Uma usuvele unesu lakho futhi ubuye wakhomba ubuchwepheshe obucabanga ukuthi buzokusiza ukuthi ubusebenzise ngempumelelo enkulu, usebenze ne-IT ukuyivivinya bese uyisebenzisa. Yakhani ubudlelwano obuqinile ne-IT ukuze nakhe inqubo ehlehlisiwe enizuzisa nina nobabili. Uma nisebenza ndawonye njengeqembu, nizothola ubuchwepheshe obuphephe kunazo zonke, obusebenzayo futhi obuvikela inkampani yakho nedatha yekhasimende lakho.
Amathuluzi we-Tech nezixazululo akuyona inkinga. Kuyiqiniso lokuthi sizinqwabelanise ndawonye zaba izitaki zobuchwepheshe zaseFrankensteined. Ubuchwepheshe sebuyinjongo, hhayi izindlela. YINKINGA leyo.
Eqinisweni, izinhlelo thina (kanye nami) esizisebenzisa nsuku zonke zivame ukuphepha futhi azinabungozi. Inkinga ivela lapho isetshenziswa futhi i-IT ingazi, lapho imishini iqala ukuphatha wena kunenye indlela ezungezile, futhi kulezo zimo lapho zifaka ingozi yokuphepha kwe-cyber.
Ekugcineni, inketho enhle kunazo zonke yileyo ebeka yonke into esiyidingayo ngempela - eyodwa, ipulatifomu yokumaketha ebumbene.
Njengebhilidi elingenakonakala, elizinzile (nakanjani hhayi umbhoshongo weJenga wezingcezu ezingalindelekile), ubuhle besiteji sokumaketha esinobunye, esikhundleni senqwaba yamathuluzi ahlanganiswe ngobuciko kucacile. Isikhathi sokucabanga kabusha leso sitaki se-tech.
Thatha i-PDF yakho ehambisanayo lapho sichaza kabanzi nge-Shadow IT, futhi sikunikeze izinto ongazithatha ukuze ususe lezi zinkinga! Xhuma nami ungazise izingqinamba ozibonile noma ohlangabezane nazo ngobuchwepheshe obuningi, noma ukuthola eminye imininingwane yokuthi ungahlanganisa kanjani yonke imizamo yakho yokumaketha yedijithali ngeplatifomu yabantu bonke eyenzelwe ngqo abathengisi.
Landa Yiziphi Izingozi Ezilele Esitokisini Sakho Sobuchwepheshe?
Tags: UmqhubiEmarsysitindawo yezobuchwepheshe bokumakethamartechisitaki se-martechingozinokuvikelekaisithunziumbhoshongo wobuchwephesheUkukhethwa komthengisi
ULindsay Tjepkema uyi-CEO futhi ungumsunguli we-Casted, okuyipulatifomu yokuqala neyodwa yokumaketha eyakhelwe kuma-podcast anophawu. Ngeminyaka engaphezu kwengu-15 yokuhlangenwe nakho ekumaketheni kwe-B2B, kufaka phakathi ukusebenzela i-ejensi yakhe yokubonisana, ungumholi onamandla oye waba nempumelelo enkulu ekwakheni amaqembu akhulayo kwezokumaketha ezingeni lasekhaya nasemhlabeni jikelele. Ngemuva kokwethula i-podcast enophawu lwenkampani yezentengiso yomhlaba wonke, uLindsay waqaphela ukuthanda kwakhe izingxoxo eziyiqiniso. Lokhu kumholele ekusunguleni i-Casted ukusiza abathengisi ukuvula amandla aphelele wokuqukethwe kwabo ngokusebenzisa amandla we-podcasting. Le nkampani selokhu yathola ukudonswa ngokushesha phakathi kwemikhiqizo efisa ukudala ukuxhumana okukhulu nezithameli zayo ngengxoxo eyiqiniso.
Kuthatha Isikhathi Eside Ukukala Emiphumeleni Yosesho lweGoogle?
Productsup: Ukuhlanganiswa kokuqukethwe komkhiqizo nokuphathwa kokuphakelayo